Home Wararka Maamulka G/Banaadir oo kahadlay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Maamulka G/Banaadir oo kahadlay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Waxaa xalay siyaabo kala duwan qaraxyo ay uga dheceen qaar ka mid ah degmooyinka Gobolkani Banaadir, waxaana la sheegay in qaraxyadaas ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo soo gaaray dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan Dowladda.
Jugta qaraxyada ayaa xalay laga maqlay xaafadaha iyo degmooyinka Magaalada muqdisho, waxaana tan iyo xalay soo baxayay warar kala duwan oo la xariira jugta xalay laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir.
Waxaa la sheegay in ku dhawaad 10 xaruumood xalay la weeraray oo ka tirsan Gobolka, goobaha la weeraray ayaa ah xaruumaha degmooyin iyo kontorolada ku yaalla qaar ka mid ah degmooyinka.
Afhayeenka Gobalka Banaaadir Saalax Xasan Cumar ayaa xaqiijiyay in xalay 10 xaruumood lagu weeraray bam gacmeedyo, waxaana ka mid ah goobaha la weeraray xarunta degmada Dherkeenlay, xarunta degmada Wadajir,xarunta degmada Waaberi iyo xarunta degmada kaaraan.
Sidoo kale Saalax Xasan Cumar waxaa uu sheegay in xalay Bam gacmeedyo lagu tuuray waaxyada degmooyin ay ka mid yihiin Deyniile, Shibis, Boondheere, Yaaqshid, Kaaraan iyo xarunta Garasbaaleey ee duleedka Muqdisho.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan khaasare ka dhashay qaraxyadaasn isagoo sheegay in afar qof ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo seddex ka mid ah ay yihiin dad shacab ah halka midka kalena uu yahay Askari ka tirsan ciidanka dowladda, balse waxaa jira warar kale oo sheegaya in khaasaruhu uu intaas ka badan yahay.
Ciidanka Booliska ayaa qaraxyada ka dib waxaa ay sameeyeen howlgalo waxaana uu sheegay Afhayeenku in la qabtay labo ruux oo looga shakiyay in ay ku lug lahaayeen falalka xalay muqdisho ka dhacay.
Qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ayaa maal-mahan soo badanaya waxaana xusid mudan in habeen ka hor qarax uu ka dhacay degmada Waaberi kaasoo ay sheegteen dagaalamayaasha Al-shabaab.
Previous articleQoor Qoor “Farmaajo waan u sheegnay in uusan imaan Dh/Mareeb isaga oon wadin RW Habargedir ah”
Next articleMW Waare oo war kasoo saaray shirka dhuusamareeb
(Daawo) Qarax kii ugu weynaa adduunka oo ruxay magaalada Beyruud ee...
RW Rooble oo ka jawaabay go’aankii Farmaajo